यसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्छ कि बस्दैन् ? [हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा] - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मानिसहरुको जीवनमा जब सन्तुष्टि मिल्छ त्यहाँ आन्नद मिल्छ । यस दौडमा मानिसहरु हर सम्भव प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै मध्यको एक शाररीक सुख पनि रहेको छ । यससँग जोडिएका धेरै कुराहरु नजानेर दम्पतीबीच सम्बन्ध खराब भएको हामीले देखेका छौ । यस्तै केही जिज्ञासाहरुको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
पहिलो जिज्ञासा यसप्रकार रहेको छः
माथिका दुई व्यक्तिहरुको जिज्ञासाको उत्तरमा डा. महिन्द्र वत्स महिला ग र्भवती हुन सक्छिन् भन्छन् । उनका अनुसार यी ग र्भावस्थाबाट जोगिने सब भन्दा प्रभावकारी तरीका होइनन् । डा. महिन्द्र वत्स जोखिम नलिन अनुरोध गर्छन । उनले भने, ‘यदि तपाईं ग र्भवती हुन चाहानुहुन्न भने, कृपया क न्ड म प्रयोग गर्नुहोस् ।’